Waa Maxay Xaqiiqada La Kordhiyay? Taariikhda Teh iyo Tusaalooyinka dhabta ah ee adduunka ee AR
Waa Maxay Xaqiiqada Kobcisay? Sidee AR Loogu Kala Diray Calaamadaha?
Axad, Juun 3, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Marka laga eego aragtida suuqleyda, waxaan runtii aaminsanahay in xaqiiqda la kordhiyay ay leedahay wax badan oo ka karti badan xaqiiqda dhabta ah. In kasta oo xaqiiqda dalwaddu ay noo oggolaanayso inaan la kulanno waayo-aragnimo gebi ahaanba macmal ah, xaqiiqda la kordhiyay ayaa kobcin doonta oo la macaamili doonta adduunka aan hadda ku nool nahay. Waxaan horay u wadaagnay sida AR waxay saameyn ku yeelan kartaa suuq geynta, laakiin ma aaminsani inaan si buuxda u sharaxnay xaqiiqda la kordhiyay oo tusaalooyin laga bixiyay.
Furaha suurtagalnimada suuqgeynta waa horumarka tikniyoolajiyadda casriga ah. Iyada oo baaxadda ballaadhku badan yahay, xawaaraha xisaabinta ee miiska miiska laalaabanaysa dhawr sano ka hor, iyo xusuus badan - aaladaha casriga ahi waxay albaabbada u furayaan koror dhab ah oo koror ah iyo horumarin. Xaqiiqdii, dhammaadka 2017, 30% dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay isticmaaleen barnaamij AR ah… in kabadan 60 milyan oo isticmaaleyaal ah oo ku nool Mareykanka oo keliya
Waa Maxay Xaqiiqada La Kordhiyay?
Xaqiiqda la kordhiyay waa tiknoolajiyad dijitaal ah oo ka dul sarreysa qoraalka, sawirrada ama fiidiyowga walxaha muuqaalka ah. Barteeda, AR waxay bixisaa dhammaan noocyada macluumaadka sida goobta, cinwaanka, muuqaalka, maqalka iyo dardargelinta xogta, waxayna u fureysaa waddo looga jawaabo waqtiga-dhabta ah. AR waxay bixisaa waddo lagu yareeyo farqiga u dhexeeya khibradda jireed iyo dhijitaalka ah, awood siinta noocyada si ay si wanaagsan ula macaamilaan macaamiishooda una kaxeeyaan natiijooyinka ganacsiga dhabta ah geeddi-socodka.
Sidee AR Loogu Hawlgaliyay Iibinta iyo Suuqgeynta?
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee Elmwood, tiknoolajiyada jilitaanka sida VR iyo AR ayaa lagu wadaa inay bixiyaan qiime deg deg ah badanaa tafaariiqda iyo noocyada macaamiisha ee laba aag muhiim ah. Marka hore, waxay ku dari doonaan qiimo halka ay ku xoojinayaan khibrada macmiilka ee sheyga laftiisa. Tusaale ahaan, adoo ka dhigaya macluumaadka badeecada qalafsan iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah kuwo ku lug leh is-dhexgalka, siinta tababaro tallaabo-tallaabo ah, ama siinta dabeecado qaawan, sida xaaladda u hoggaansamida daawada.
Marka labaad, teknoolojiyadaani waxay ka dhaqaaqi doonaan halka ay ka caawin karaan noocyada inay wargeliyaan oo ay u beddelaan sida dadku u arkaan astaanta iyagoo soo saaraya khibrad hodan ah, waayo-aragnimo is-dhexgal ah iyo sheekooyin soo jiidasho leh kahor iibsiga. Tan waxaa ka mid noqon kara sameynta baakadaha kanaal cusub oo loogu talagalay ka qeyb qaadashada, isku soo dhaweynta farqiga u dhexeeya dukaamaysiga internetka iyo jirka, iyo u keenista xayeysiis dhaqameed nolosha sheekooyin caan ah oo awood leh.
Tusaalooyinka hirgelinta dhabta ah ee dhabta ah ee iibka iyo suuqgeynta
Hal hogaamiye waa IKEA. IKEA waxay leedahay barnaamij wax iibsi oo kuu saamaxaya inaad si fudud ugu wareegi karto sheekadooda una heli karto alaabada aad soo ogaatay markaad guriga ku dhex baareyso. Iyadoo IKEA Meel loogu talagalay macruufka ama Android, barnaamijkooda u oggolaanaya dadka isticmaala inay "meel dhigaan" alaabada IKEA meeshaada.
Amazon ayaa raacday tusaalaha leh Aragtida AR macruufka.
Tusaale kale oo ku saabsan suuqa waa muuqaalka Yelp ee iyaga ku jira app mobile loo yaqaan Monocle. Haddii aad soo dejiso barnaamijka oo aad furto liiska badan, waxaad heli doontaa ikhtiyaar la yiraahdo Monocle. Open Monocle iyo Yelp ayaa ka faa'iideysan doona goobtaada juqraafi, booska taleefankaaga, iyo kamaraddaada si aad xogtooda ugu dul mariso muuqaalka kamaradda. Runtii waa wax qurux badan - Waan layaabay inaysan ka hadlin marar badan.
Masraxyada AMC waxay bixisaa a codsiga mobile taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad farta ku fiiqdo boodhadhka oo aad daawan kartid muuqaalka filimka.
Qaab dhismeedka bilaabay muraayadaha is-dhexgalka ee dukaamada tafaariiqda halkaas oo isticmaalaha uu ku fiirsan karo sida ay u eegi lahaayeen qurxinta, timaha, ama alaabada maqaarka la mariyo. Sephora waxay ku sii daayeen tiknoolajiyadooda iyagoo adeegsanaya codsi mobayl ah.
Shirkaduhu waxay hirgelin karaan codsiyadooda dhabta ah ee la kordhiyay iyagoo adeegsanaya - ARKit ee Apple, ARCore ee Google, ama Hololens ee Microsoft. Shirkadaha tafaariiqda ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara Augment ee SDK.
Xaqiiqada La Kordhiyay: Hore, Hadda, iyo Mustaqbalka
Halkan waxaa ku yaal dulmar guud oo ku saabsan infographic, Waa Maxay Xaqiiqadu, waxaa loogu talagalay Vexels.
Tags: arsuuqa arxaqiiqda la kordhiyayqeexitaanka dhabta ah ee la kordhiyaymustaqbalka ama artaariikhda arikea buuggaikea buuggavexelswaa maxay arwaa maxay xaqiiqda la kordhiyayyelp barnaamijka moobiilkaqayli monocle
4-ta Faa’iido ee ay leeyihiin saamileyda yar-yar
Waxsoosaarka Dimuqraadiga ah: Tiknoolajiyadda Shakhsiyadeed ee Gaarka ah ee loo yaqaan AI-Powered Omnichannel